Oersted experiment: njirimara na echiche | Netwọk Mgbasa Ozi
Onye nyocha ahụ nke aha ya bụ Hans Christian Oersted hụrụ na 1819 ka enwere ike ịgbagọ agịga magnetik site na mmetụta nke ọkụ eletrik. Agịga magnetị bụ ihe mebere magnet. A maara nnwale a dị ka Oers mere ma kpughere ịdị adị nke njikọ dị n'etiti ọkụ eletrik na ndọta. Ruo oge a ha bụ ihe abụọ dị iche iche yana gravitation na ọkụ eletrik.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe nyocha Oersted nwere na ihe njirimara ya na ntụgharị uche ya.
1 Mmalite nke nyocha Oersted
3 Onyinye nke Oersted nnwale
4 Echiche ikpeazụ
Mmalite nke nyocha Oersted
Ekwesiri iburu n'uche na, n'oge ahụ, teknụzụ dị ugbu a adịghị enwe ike ịme nyocha na nkwupụta na usoro sayensị. Oersted si nnwale gosipụtara na enwere njikọ n'etiti ọkụ eletrik na ndọta. Iwu ndị na-akọwapụta mmekọrịta ndọta na ọkụ eletrik bụ André Marie Ampère bụ onye na-ahụ maka ịmụ ike dị n'etiti eriri ndị ọkụ eletrik na-agbasa.
Ihe niile sitere na myirịta dị n'etiti ndọta na ọkụ eletrik. Ọ bụ ihe atụ a mere ka a chọọ n'ime mmekọrịta dị n'etiti ha na nke nwere ike ịkọwapụta njirimara ndị a na-ahụkarị. Mgbalị ndị mbụ iji nyochaa mmekọrịta dị n'etiti ụgwọ eletrik nke magnet enyeghị ọtụtụ nsonaazụ. Ihe ha gosipụtara bụ na site na itinye ihe ndị a na-agbanye n'ọkụ eletrik n'akụkụ ihe ndọta, otu ike dị n'etiti ha. Ike a bụ nke ụwa na-adọrọ mmasị dị ka nke dị n'etiti ihe ọ bụla ebubo na ọkụ eletrik na ihe na-anọpụ iche. N'okwu a, ihe ahụ bụ ndọta.
Ihe ndọta na ihe eletrik na-adọta ma enweghị ike ịdọrọ ya. Nke a na-egosi na enweghị mmekọrịta magnetik na-eme n’etiti ha. Ọ bụrụ otu a, ọ bụrụ na ha ga-eduzi. Oersted buru ụzọ mee nnwale ahụ nke gosipụtara enyemaka nke mmekọrịta dị n'etiti ọkụ eletrik na ndọta. Ugbua n'ime afọ 1813 ebuwo amụma na enwere ike inwe mmekọrịta n’etiti ha abụọ mana ọ bụ n’afọ 1820 ka o gosipụtara ya.
O mere mgbe ọ na-akwadebe klas ya na physics na Mahadum Copenhagen. N'ime klaasị a, ọ nwere ike ịhụ na ọ bụrụ na ọ kwaga compass n'akụkụ waya nke na-ebu ọkụ eletrik, agịga kompas na-eche ihu na ọ ga-adị n'akụkụ akụkụ nke waya ahụ.
Ihe dị iche nke dị na nyocha nke Oersted na mgbalị ndị ọzọ gara aga nke nwere nsonaazụ na-adịghị mma bụ na nnwale nke akaghị na nke ugbu a ebubo ndị na-emekọ ihe ndọta na-agagharị. Buru eziokwu a n'uche, a ga-amata nsonaazụ nke Oersted ebe ọ bụ na e mere atụmatụ na ọkụ eletrik niile nwere ike ịmepụta ebe magnet. Ampere bụ onye sayensị jiri atụmatụ nke njikọ dị n'etiti iju mmiri na ndọta iji tụlee nkọwa maka ihe ndị a niile. N'ihi mkpebi ya, ọ nwere ike ịkọwapụta nkọwa nke nyere ihe omume maka ndọta nke magnetism ma nwee ike ịhazi mmepe niile na usoro mgbakọ na mwepụ.
Onyinye nke Oersted nnwale
Nchọpụta na ọkụ eletrik niile nwere ike ịmịpụta magnet nwere ike imepe ọtụtụ ụzọ nyocha na ndọta na mmekọrịta ya na ọkụ eletrik. N'ime ụzọ niile a ghere oghe nwere ihe ndị na-arụpụta mkpụrụ nke anyị mepụtara ruo isi ihe ndị a:
Na mkpebi siri ike nke oghere magnet nke emeputara site na uzo di iche iche. A zara nke a n'ihi mkpa ọ dị ịmịpụta magnetik nke ike na nhazi nke ahịrị ha ndị a na-achịkwa. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-ekwe omume ijikwa uru nke njupụta okike ma nwee ike ịmepụta magnetik ndị ọzọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Ojiji nke ike ndi di n’agbata osiso eletriki na igwe ihe igwe. Site na mmata nke ihe omuma a, enwere ike iji ya mee ihe maka igwe eletriki eletriki, ihe di iche iche eji eme ka ha mata ike nke ugbu a na ngwa ndi ozo. Dịka ọmụmaatụ, a na-eji usoro elektrọnik arụ ọrụ n'ọtụtụ ebe taa. Ejirila elektrọnik rụọ ọrụ site na iji ike ndị dị n'etiti iyi ọkụ na ndọta.
Nkọwa nke magnetism. N'ihi iji nyocha nke Oersted, ọ ga-ekwe omume ịdabere ihe ọmụma a chịkọbara n'oge a na usoro nke ihe. E gosipụtakwala eziokwu ahụ bụ na ihe ọ bụla dị ugbu a nwere ike ịmịpụta ihe ndọta na gburugburu ya. Site na ebe a ka a maara omume niile iji nwee ike iji ya mee ihe.
Mmeghachi omume nke enwere ike igosi na nnwale nke Oersted abụrụla maka ulo oru inweta eletrik na ojiji ya site n'ọnụ ọgụgụ ndị bi na ya. Ojiji a dabere na ịnweta ọkụ eletrik site na ndọta magnet.
Anyị ga-eme ntakịrị ngosiputa na nnwale Oersted yana kedu onyinye ya na ụwa sayensị. Anyị maara na waya mejupụtara ebubo dị mma na nke na-adịghị mma. Ma oru na-guzobere na onye ọ bụla ọzọ mere na ngụkọta ibu bụ efu ebe anyị jiri anya nke uche nke cable kpụrụ abụọ ogologo yiri ahịrị. Ọ bụrụ na anyị ebugharị eriri n'ozuzu ya, ma na ahịrị abụọ na-aga n'ihu, ọ dịghị ihe na-eme. Otú ọ dị, ọ bụrụ na e guzobe ụzọ nke ọkụ eletrik, ahịrị ahụ na-aga n'ihu ma mepụta ubi nke na-egbochi agịga magnet.
Site na nke a anyị na-enweta echiche na ihe na-ewepụta ubi abụghị mmegharị nke ebubo, mana mmegharị nke ebubo nke otu akara banyere nke ọzọ. Nkọwa nke ihe kpatara agịga ahụ na-agagharị bụ na ugbu a nke eriri mmepụta magnetik nke akara ya na-abanye n'otu njedebe ma pụọ ​​na nke ọzọ. Nke a bụ otú agịga ahụ si agagharị na-eso ebe ndọta.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere nnwale Oersted yana onyinye ya na ụwa sayensị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oper gosiri
Cape nke Ezi Olileanya
Apiti nke Madrid